मनीषामाथि दुर्व्यवहार हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई फोन ! | Filmy Bahar
मनीषामाथि दुर्व्यवहार हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई फोन !
मुम्बई । सन् ९० को दशकमा लाखौं दर्शकको हृदयमा राज गरेकी अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले बलिउडमा कैयौं सुपरहिट फिल्ममा काम गरेकी छन् । सन् १९९१ मा निर्देशक सुभाष घईले आफ्नो फिल्म ‘सौदागर’मा मनीषालाई ब्रेक दिएका थिए । यो फिल्ममा उनका साथ सुपरस्टार राजकुमार र दिलीप कुमार मुख्य भूमिकामा थिए ।
यो फिल्मको सुटिङ कुल्लू मनालीबाट भएको थियो । यो फिल्मको युनिटका एक सदस्यले मनीषामाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए । मनीषा नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाकी नातिनी हुन् । जब मनीषाले सेटमा आफूमाथि भएको व्यवहारको बारेमा आमालाई बताइन्, तब आमाले मनीषाका पिता प्रकाश कोइरालालाई यो कुुराको जानकारी गराए ।
प्रकाशले तुरुन्तै नयाँदिल्लीमा फोन गरेर एक वरिष्ठ नेतासमक्ष यो कुरा पुर्याए । ती नेताले तुरुन्त प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंहलाई फोन गरेर सारा घटना विवरण सुनाए ।
यो मामला त्यसै सुल्झिएन । त्यो समयका प्रधानमन्त्री सिंहले राज बब्बरलाई फोन गरेर मनीषामाथि भएको दुव्र्यवहारको छानविन गर्न कुरा राखे । राज तुरुन्त महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्रीकोमा पुगे । यो घटनापछि सानाठूला नेता कुल्लु मनाली पुगे । जहाँ फिल्मको सुटिङ भइरहेको थियो ।
सुटिङ सेटमा यस्ता कुरा भइरहनुलाई सामान्य ठानिए पनि मनीषाको हकमा प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुगेपछि सबै चकित परेका थिए । त्यसपछि कोहीले पनि मनीषामाथि गलत व्यवहार गर्न सकेनन् ।
तिमी बिनामा विश्वजित र अष्मिता
दिलीपसँग उर्मिलाको माया बैगुनी